Robot kichin - kedu nke m ga-ahọrọ, ụdị na uru ya? | Bezzia
Robot a na-eji esi nri, nke m kwesịrị ịhọrọ?
Susana godoy | 09/06/2021 16:00 | Nri
Ọ bụ otu n'ime ajụjụ ndị anyị nwere ike ịjụ onwe anyị kachasị ma ọ bụ na e nwere ọtụtụ ma dịgasị iche iche ígwè ọrụ na kichin na anyị nwere n'ahịa. Yabụ, mgbe ụfọdụ ọ na-esiri anyị ike ịhọrọ otu. Anyị amaghị ihe anyị kwesịrị ile anya tupu ịmalite n'ime ya, yabụ taa anyị ga-enyere gị aka.
Anyị ga-enye gị ndụmọdụ kachasị mma yana ozi niile akọwapụtara nke mere na nhọrọ gị kacha mma maka mkpa gị. Maka na obughi anyi nile nwere otu, ma anyi choro izụta ezigbo ihe. Yabụ, ị nọ n'aka kacha mma ma ugbu a anyị ga-egosi gị.
1 Kedu ihe bụ robot kacha mma maka isi nri
2 Kedu ihe bụ robot kichin kacha ere ahịa
3 Kedu uru ndị a na-eme na ígwè ọrụ kichin
Kedu ihe bụ robot kacha mma maka isi nri
O doro anya na e nwere ọtụtụ ụdị na ọtụtụ ụdị na ị nwere n'ahịa. Mana nke ha niile, ị kwesịrị ị na-eche mgbe niile usoro usoro tupu ịzụrụ ha. N'ihi na ọ bụ eziokwu na ha nwere nnukwu elele mana ha kwesiri ka emegharị anyị na ndụ anyị.
Ike nke igwe kichin anyị bụ otu n'ime isi ihe dị mkpa. Maka na anyị ga-enyocha nke a dịka nri ndị anyị na-eri. Ọ bụrụ na ị na-abụkarị mmadụ anọ iri nri, ọ gaghị abụ otu ụlọ na mmadụ abụọ ma ọ bụ ikekwe naanị otu ga-ebi. Yabụ ị nwere ụdị lita abụọ yana lita 5.
Ike bụ ihe ọzọ dị mkpa. N'ihi na ike a na-enwewanye ike na ike karịa na ọ ga-adị ogologo oge yana nsonaazụ kacha mma. Fọdụ nwere 500W nke ike, ebe ndị ọzọ gafere 1000W n'ụzọ dị anya.
Ọrụ ndị ọ nwere bụ echiche ọzọ ile anya. N'ihi na ụfọdụ nwere ọrụ ruru iri na abụọ na ndị ọzọ karịrị asatọ. Ihe dị mma bụ ịmata ndị ọ na-eweta ma chee ma ọ ga-eso ha dabere na nri ị na-akwadebekarị. Modelsdị kachasị dị n'ụdị nwere isi na ọrụ dị mkpa.
Ọrụ ndị ọzọ ha nwere, ọtụtụ ngwa ha ga-enyekwa iji kwado ha.
Ga-emerịrịrịrị na akụkụ ya na ngwa ya dị ọcha ma ọ bụ na ha nwere ike ịga na asacha efere., na-echekwa oge.
Kedu ihe bụ robot kichin kacha ere ahịa
Ọ bụrụ na ị na-eche nke bụ robọt kichin kachasị mma, anyị enweghị ike ịza gị naanị otu n'ihi na enwere ọtụtụ ụzọ isi. Mana enwere ụfọdụ ndị tinyela onwe ha dị ka igwe ọrụ na-ere ere na Amazon.
Ebe mbụ na-aga robot Cecotec Mambo Ọ nwere ọrụ 30, lita 3,3 nke ikike, yana akwụkwọ nchịkọta na ọ bụ nchekwa efere. Ọ bụrụ na ịchọrọ onye enyemaka dị mma, biko egbula ịzụta ya ebe a.
N'ezie ọ bụrụ n’ịchọrọ ịchekwa obere ego ma nwee oke nhọrọ n'akụkụ gị, enwere ụdị a ị ga - ahụ ebe a ma nke ozo na ere ebe a otu. Nke mbụ nwere 900W na ọrụ ndị kachasị mkpa, ebe nke abụọ nwere menu ahaziri ahazi 8 na lita 5 nke ikike.
La ika Moulinex O nwekwara otutu ụdị igwe eji agba kichin nke edoziri onwe ha n'etiti ndị kacha ere ahịa. Otu n'ime ha bụ nke nwere lita 3,6 nke ikike, yana akwụkwọ nhazi na mmemme akpaka 5 anyị hụrụ ebe a.
Kedu uru ndị a na-eme na ígwè ọrụ kichin
Anyị ahụworị ihe anyị kwesịrị ile anya mgbe anyị na-azụ ya, yana ụfọdụ ụdị ndị kachasị ere. Ọfọn, ịmara ihe a niile, ọ ga-anọgide na-elekwasị anya na uru.
Ha na-echekwa oge anyị na kichin, ebe ọ bụ na ha nwere ike ịhazi ihe niile ga-arụ ọrụ niile na-enweghị mkpa ka anyị nọrọ na ya.
Ma okpomọkụ ma oge na-achịkwa nke ruru ka nsonaazụ kacha mma.
Ha nwere akwụkwọ nri nke na enyere anyị aka ịkwadebe efere n’ụzọ dị iche iche.
Ozugbo Emechara, ị ga-enweghị ọtụtụ ihe ọcha na kichin gị ga-abụ ihe zuru okè mgbe niile.
Ha dị ike ma na-arịwanye elu nwere nhazi ọnụ ya mere ha anaghị ewe oke ohere.
O doro anya na mgbe ihe a nile gasịrị, ị ga-enye ha ohere ịga n'ihu iji tinye ya n'ime ụbọchị gị! Igwe kichin ga-enyere gị aka n'oge niile.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Home » Nri » Robot a na-eji esi nri, nke m kwesịrị ịhọrọ?
Massimo Dutti na-enye ụlọ obibi akwụkwọ ọhụrụ SS21: New Edgy